नोर्को बनाम भिकोडिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण खेलहरु मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण कम्पनी, चेकआउट चेकआउट कम्पनी भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> नोर्को बनाम भिकोडिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
नोर्को बनाम भिकोडिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
नर्को र भिकोडिन दुई ब्रान्ड नाम औषधि हुन् जुन मध्यमदेखि गम्भीर दुखाइको प्रबन्धमा प्रयोग गरिन्छ। नोर्को र भिकोडिन दुबै औषधि - हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेनaको संयोजन हो र ओपियोइड दर्द निवारकको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। २०१ 2014 मा, औषधि प्रवर्तन प्रशासन (DEA) ले व्यसन, दुरुपयोग, र दुरुपयोगको उच्च सम्भावनाको कारण यसको वर्गीकरण अनुसूची III बाट कार्यक्रम दोस्रोमा परिवर्तन गर्‍यो। अनुसूची २ एक स्वीकार्य औषधीय प्रयोगको साथ उपलब्ध औषधिहरूको सबैभन्दा खतरनाक तालिका हो।
नोर्को र भिकोडिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
नर्को एक औषधी हो जुन cet२ mg मिलीग्राम एसिटामिनोफेनको संयोजन सहित mg मिग्रि, .5..5 मिलिग्राम, वा १० मिलीग्राम हाइड्रोकोडोन हो। कोइडिनको व्युत्पन्न हाइड्रोकोडोनले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा ओपिओइड रिसेप्टर्सलाई बाँधेर दुखाई धारणा कम गर्न काम गर्दछ। त्यसो गर्दा, यसले पीडाको बारेमा हाम्रो धारणा बदल्न सोच्दछ, यद्यपि सही संयन्त्र ज्ञात छैन। एसिटामिनोफेन, जुन ओभर-द-काउन्टर टायलेनोल फॉर्म्युलेसनमा सक्रिय संघटक हो, उत्रिएको सेरोटोनर्जिक मार्गहरू सक्रिय गरेर केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मार्फत यसको एनाल्जेसिक प्रभावहरू पनि प्राप्त गर्दछ।
Vicodin एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पनि हो जुन हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेनको मिश्रण हो। नोर्को र भिकोडिन बीचको प्राथमिक भिन्नता भनेको विकोडिनमा 300००5 मिलिग्रामको सट्टामा cet०० मिलीग्राम एसिटामिनोफेन मात्र हुन्छ। विकोडिनले cet०० मिलीग्राम एसिटामिनोफेन या त mg मिग्रि, .5..5 मिलीग्राम, वा १० मिलीग्राम हाइड्रोकोडोनसँग जोड्दछ।
दुबै नर्को र भिकोडिन मौखिक ट्याब्लेट हुन् र जेनेरिक फार्महरू उपलब्ध छन्। नोर्को र भिकोडिन कलेजोले चयापचय गरेर मिर्गौलाद्वारा उत्सर्जित गर्दछन्।
नार्को र भिकोडिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग ओपिएट एनाल्जेसिक ओपिएट एनाल्जेसिक
जेनेरिक नाम के हो? हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेन हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेन
मानक खुराक के हो? Mg मिग्रा / 5२5 मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा Mg मिग्रा / mg०० मिग्रि प्रत्येक to देखि hours घण्टा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? Days दिन वा कम Days दिन वा कम
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? बच्चाहरू २ बर्ष र अधिक उमेरको, वयस्कहरू बच्चाहरू २ बर्ष र अधिक उमेरको, वयस्कहरू
नर्कोमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
नर्को मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
सर्तहरू नोर्को र भिकोडिन द्वारा उपचार गरिएको
नोर्को र भिकोडिन प्रत्येकलाई मध्यमदेखि गम्भीर दुखाइको उपचारमा संकेत गरिएको छ जसको लागि अन्य गैर-ओपिओइड विकल्पहरू अपर्याप्त छन्। औषधिको दुरुपयोग र दुरुपयोगको सम्भावनाको कारणले गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि नोर्को र विकोडिनको प्रयोग सीमित हुन ती बिरामीहरूको लागि मात्र हो जसले अन्य पीडा-मुक्त विकल्पहरू प्रयोग गरेका छन् र अपर्याप्त छन् वा लक्षणहरूको कुनै राहत छैन। यदि ओपिट पेन्ट रिलिभरको प्रयोग आवश्यक मानीन्छ भने, सकेसम्म छोटो अवधिमा प्रयोग सीमित गर्न प्रत्येक प्रयास गरिनु पर्दछ।
सर्त नोर्को विकोडिन
मध्यम गम्भीर दुखाइ हो हो
के नर्को वा भिकोडिन बढी प्रभावकारी छ?
नोर्को र भिकोडिन एउटै दुई औषधिहरूको संयोजन हो र एसिटामिनोफेन सामग्रीमा २ mg मिलिग्राम मात्र भिन्न हुन्छ। अन्य प्रभाव व्यवस्थापन विकल्पहरूको तुलनामा उनीहरूको प्रभावकारिता राम्रोसँग बुझिन्छ किनकि सामग्री समानताका कारण तिनीहरूको अपेक्षित प्रभावकारिता समान छ।
निर्धारित ओपिएट गर्नु भन्दा पहिले अप-ओपेट वा कम लत विकल्प प्रयोग गर्न प्रेसरहरूलाई प्रोत्साहन दिइन्छ। A अध्ययन को प्रभावकारिता तुलना गरी आयोजित गरिएको थियो ट्रामाडोल , एक IV नियन्त्रित पदार्थ र अल्ट्राममा सक्रिय घटक, हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेनको संयोजनको लागि।
यी औषधीहरू मांसपेशिलोकमा आघात पछि हल्कादेखि मध्यम दुखाइ हुने बिरामीहरूका लागि अनियमित गरिएको थियो। अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्‍यो कि ट्रामाडोल प्राप्त गर्नेहरूको तुलनामा हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेन प्राप्त गर्ने बिरामीहरूमा पीडाबाट छुटकारा राम्रो थियो। यस अध्ययनले पत्ता लगायो कि ट्रामाडोल समूहमा उच्च दरमा चक्कर, बान्ता, र बान्ता जस्ता साइड इफेक्टहरू पनि रिपोर्ट गरिएको थियो।
TO हालसालैको अध्ययन अक्सिकोडोन / एसिटामिनोफेनको संयोजनलाई हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेनको तीव्र मुस्कुलोस्केलेटल दुखाईमा तुलना गर्नुहोस्। ऑक्सीकोडोन / एसिटामिनोफेनको संयोजन हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेन भन्दा धेरै समयको लागि तालिका २ नियन्त्रित पदार्थ भएको छ। परिणामहरूले पत्ता लगाए कि अक्सीकोडोन / एसिटामिनोफेन पीडाबाट राहत पाउने हाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेनभन्दा राम्रो थिएन। दुबै औषधिहरूले लगभग %०% ले दर्द कम गर्ने क्षमता देखायो।
तपाईका चिकित्सकले मात्र निर्धारण गर्न सक्दछ कि कुन दुखाइ औषधी तपाईको लागि उपयुक्त छ। अक्सर, चिकित्सकहरूले अनुभवको आधारमा एक औषधि चयन गर्दछन् र बिरामीको प्रतिक्रियाको अवलोकन पछि खुराक समायोजन वा ड्रग परिवर्तन गर्दछन्।
कभरेज र नोरको बनाम Vicodin को लागत तुलना
नोर्को र भिकोडिन सामान्यतया दुबै वाणिज्यिक र मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छन्, यद्यपि केही सीमाहरू लागू हुन सक्दछन्। चिकित्सा सेवाहरूको लागि डीईए र केन्द्रहरूले ओपिट दुरुपयोग महामारी र हाम्रो समाजमा यसको सम्भावित प्रभावहरू पहिचान गर्दछ। प्रतिक्रियामा, जनवरी १, २०१ 2019 मा, धेरै लेखीरहेको छ सीमितता र दिशानिर्देशन प्रभावमा गयो।
यस प्रयासका धेरै पक्षहरू छन् ओपिट प्रिस्क्रिप्शन र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न। मेडिकेयर भाग डी लाभार्थीहरू जो ओफिएट भोली छन् एक ओपिटको प्रारम्भिक भर्नामा सात दिनको प्रिस्क्रिप्शनमा सीमित छन्। थप औषधी प्राप्त गर्न सात दिनको अन्त्यमा बिरामीको आवश्यकता पुन: मूल्या must्कन गर्नुपर्दछ। (ओपिएट भोलीलाई बितेको 60० दिनमा ओपिट नलिएको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।) सात दिन पछि, यदि थप औषधि आवश्यक छ भने, सल्लाहकारहरूले लामो अवधिको लागि सल्लाह दिन सक्दछन्। यी नियमहरूमा अपवादहरू छन्, जस्तै होस्पिस र क्यान्सर-सम्बन्धित हेरचाह। केहि पुरानो दुखाई निदान पनि अपवादहरू निर्धारित गर्नका लागि योग्य हुन्छ। धेरै वाणिज्य बीमा योजनाहरूले उनीहरूका लाभार्थीहरूको लागि यस्तै सीमाहरू अपनाएका छन्। फार्मासिष्टहरूका अफिफ औषधिहरू भर्ने पनि विशेष नीतिहरू हुन सक्छन्।
जेनेरिक नार्कोको औसत खुद्रा लागत १० मिलीग्राम / 5२5 मिलीग्राम शक्तिको tablets ० ट्याब्लेटहरूको लागि १०० डलर जति हुन सक्छ। तपाईं सामान्य संस्करण एकलकेयरबाट कुपनको साथ खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, र यसलाई $ 30 भन्दा कममा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
Vicodin प्राय जसो बीमा कम्पनीहरूले यसको जेनेरिक फार्ममा कभर गर्दछ, र केहि मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरू द्वारा। Vicodin को एक औसत नुस्खे को बारे मा $ 400 खर्च हुन सक्छ। एक सिंगलकेयर कूपनले जेनेरिक भिकोडिनको मूल्य $ १०० लाई कम गर्न सक्दछ जुन तपाईं फार्मेसी प्रयोग गर्नुहुन्छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो, सीमितता संग हो, सीमितता संग
सामान्यतया चिकित्सा द्वारा कभर? हो, सीमितता संग हो, सीमितता संग
मानक खुराक १० मिलीग्राम / 5२5 मिलीग्राम ट्याब्लेट //3०० मिलीग्राम ट्याब्लेट
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे सामान्यतया $ २० भन्दा कम सामान्यतया $ २० भन्दा कम
एकलकेयर लागत $ 28– $ 32 $ 98– $ 152
नोर्को बनाम भिकोडिनको साझा साइड इफेक्टहरू
नोर्को र भिकोडिनले उनीहरूको समान सामग्रीको कारणले उस्तै साइड इफेक्टहरू हुने सम्भाव्यता राख्दछ। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा उनीहरूको प्रभावसँग सम्बन्धित साइड इफेक्टमा निन्द्रा, चक्कर, र टाउको दुखाइ समावेश छ। प्रत्येक बिरामीले बिभिन्न डिग्रीमा यी प्रतिकूल प्रभावहरूको अनुभव गर्न सक्दछ र यो खुराकमा निर्भर हुन सक्छ।
ओपिएट दुखाइ कम गर्नेहरू कब्जको कारणको रूपमा परिचित छन्, विशेष गरी जब लामो समयको लागि दिइन्छ। पानीको मात्रा बढाउँदा वा स्टूल सफ्टनर लिदा यस साइड इफेक्ट लाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
निम्नलिखित सूची संभावित साइड इफेक्ट को एक समावेशी सूची समावेश गर्न को लागी हैन। प्रतिकूल घटनाहरूको पूर्ण सूची र चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईंले आफ्नो डाक्टर, फार्मासिष्ट, वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु पर्छ।
तन्द्रा हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
सुस्ती हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
चक्कर आउने / लाइटहेडनेस हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
कब्ज हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मतली हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
प्रुरिटस हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
छाला दाग हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
स्रोत: नोर्को ( डेलीमेड ) भिकोडिन ( डेलीमेड )
नोर्को बनाम भिकोडिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
Norco र Vicodin को लागी ड्रग अन्तर्क्रिया प्रोफाईलहरू उस्तै समान छन् कि तिनीहरू समान सक्रिय तत्वहरू छन्।
ओपिएट्स जस्तै नोर्को र विकोडिनसँग अन्य सीएनएस डिप्रेसनहरूसँग सहकार्यको प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ। अन्य सीएनएस डिप्रेसनन्टहरूका उदाहरणहरूमा बेन्जोडाइजेपाइन, अन्य ओपिएन्ट पेन्किलर, र क्यानाबिनोइड ड्रग्स समावेश छन्। यी औषधिहरू सँगै प्रयोग गर्नाले गम्भीर श्वासप्रश्वासको उदासीनता, गहिरो बेहोरापन, कम रक्तचाप, कोमा वा मृत्यु हुन सक्छ।
नर्को वा भिकोडिनको साथ सेलेक्टोनिनिक रिउपटेक इनहिबिटरहरू (एसएसआरआई) जस्ता सेरोटोनर्जिक एजेन्टहरूको प्रयोगले सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोम बढेको मुटुको दर, उच्च रक्तचाप, भ्रम, र कम्पनको विशेषता हो।
ओपियोइड दर्द रिलीभरले एन्टिडीयुरेटिक हर्मोनको रिलीजको माध्यमले डायरेटिक्सको प्रभावहरू घटाउन सक्छ। यसले तरल पदार्थ स्थिति र रक्तचापमा परिवर्तन गर्न सक्छ।
निम्नलिखित तालिकाको सम्भावित ड्रगको अन्तर्क्रियाहरूको पूर्ण सूची हुन अभिप्रेत छैन। पूर्ण सूचीको लागि र अन्तर्क्रियाहरूमा सल्लाहको लागि एक चिकित्सा पेशेवरसँग परामर्श गर्नुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास नोर्को विकोडिन
द्रोबिनोल क्यानाबिनोइड्स हो हो
फेनोबार्बिटल एन्टी-एपिलेप्टिक्स हो हो
Erdafitinib इम्यूनोसप्रेशिभ एजेन्टहरू हो हो
डेसमोप्रेसिन भासोप्रेसर हो हो
Fosaprepitant Antiemetics हो हो
स्पिरोनोलाक्टोन डायरेटिक्स हो हो
आइसोनियाजिड एन्टिट्यूबिकुलर हो हो
नलट्रेक्सोन ओपिएट विरोधी हो हो
Linezolid मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकहरू हो हो
ऑक्सीकोडोन ओपिट हो हो
रोपिनिरोल डोपामाइन एगोनिस्टहरू हो हो
दासाबुवीर एन्टिवाइरल्स हो हो
Zolpidem शामक हो हो
Paroxetine चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू हो हो
नार्को र भिकोडिनको चेतावनी
नर्को वा भिकोडिन लिने बिरामीहरूमा रक्सीको प्रयोगलाई रोक्नु पर्छ। रक्सीले हाइड्रोकोडोनको सीरम एकाग्रता बढाउन सक्छ र त्यसैले सीएनएस निराशाजनक प्रभावहरू बढाउन सक्छ।
नोर्को र भिकोडिन कलेजोले चयापचय गरेर मिर्गौलाद्वारा उत्सर्जित गर्दछन्। लिखित क्षतिग्रस्त वा मृगौला समारोह बिरामी भएका बिरामीहरूलाई चिकित्सकहरूले डोज समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ।
zyrtecdके को लागी राम्रो छ?
नोर्को र भिकोडिन गर्भावस्था कोटि सी हो, गर्भवती बिरामीहरूमा हानी वा सुरक्षा प्रमाणित गर्ने कुनै मानवीय अध्ययनहरू हुँदैनन्। यी औषधिहरूको प्रयोग मात्र बिल्कुल आवश्यक प्रयोगमा सीमित हुनुपर्दछ। दुबै हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेन स्तनपान गराउने आमाहरूको स्तनको दुधमा उपस्थित छन्। स्तनपान गराउने आमाहरूमा नर्को र भिकोडिनको प्रयोग मात्र गर्न सकिन्छ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिमलाई पछाडि पार्छ।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि दुबै नर्को र भिकोडिन अत्यधिक लत लाग्ने औषधि हुन्। तिनीहरू प्रत्येकको दुरुपयोग, दुरुपयोग, शारीरिक निर्भरता, र लतको लागि उच्च क्षमता छ। तिनीहरू केवल तब प्रयोग गर्नुपर्नेछ जब सबै गैर-अप्टिमेन्ट उपचार विकल्पहरू समाप्त भइसकेका हुन्छन्। तिनीहरूको उपयोग सकेसम्म छोटो अवधिमा सीमित हुनुपर्दछ। यदि एक बिरामीले हाइड्रोकोडोन उत्पादनहरू लामो समयको लागि लिईरहेको छ भने, तिनीहरू अचानक फिर्ता रोक्ने लक्षणहरू फिर्ता लिन सक्छ। उच्च खुराक र ओपिओइड एनाल्जेसिक्स को दीर्घ-अवधि प्रयोग पछि विच्छेदन चिकित्सकको निरीक्षण संगै गरिनु पर्छ।
नोरको बनाम भोकोडिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
नोर्को भनेको के हो? / नोर्को एक ओपिओइड हो?
नोर्को एक ओपियोइड दर्द रिलिभर हो जसले हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेनको संयोजन समावेश गर्दछ। यो केवल मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा प्रिस्क्रिप्शनबाट उपलब्ध छ र डीईएले एक अनुसूची २ नशाको लागि वर्गीकृत गर्दछ। मध्यम देखि गम्भीर दुखाईको उपचारमा नोर्को स्वीकृत हुन्छ।
विकोडिन भनेको के हो?
Vicodin एक ओपियोइड दर्द रिलिभर हो जसले हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेनको संयोजन समावेश गर्दछ। यो केवल मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा प्रिस्क्रिप्शनबाट उपलब्ध छ र डीईएले एक अनुसूची २ नशाको लागि वर्गीकृत गर्दछ। Vicodin मध्यम देखि गम्भिर दुखाई को उपचार मा प्रयोग गर्न को इरादा गरीएको छ।
के नोर्को र भिकोडिन एकै हो?
नोर्को र भिकोडिन दुबै हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेन समावेश गर्दछ, तर वास्तवमा उस्तै छैन। जबकि प्रत्येक mg मिलीग्राम, .5.। मिलीग्राम, वा १० मिलीग्राम हाइड्रोकोडोन भएको सामर्थ्यमा आउँदछ, तिनीहरूको एसिटामिनोफेन सामग्री अलि फरक छ। नर्कोमा cet२5 मिलीग्राम एसिटामिनोफेन हुन्छ, जबकि भिकोडिनमा mg०० मिलीग्राम हुन्छ।
नोर्को वा भिकोडिन राम्रो छ?
नोर्को र भिकोडिनको प्रभावकारिता एक अर्कासँग एकदम मिल्दोजुल्दो अपेक्षा गर्नु उचित हुन्छ किनकि यी एसिटामिनोफेनको २ 25 मिलिग्राम मात्र हुन्छन्। अध्ययनले (माथि हेर्नुहोस्) हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेनको संयोजन ट्रामाडोलभन्दा उच्च हुन, र कम्तिमा अक्सीकोडोन र एसिटामिनोफेनको संयोजनको बराबर देखायो।
के म गर्भवती हुँदा नर्को वा भिकोडिन प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ कुनै राम्रो अध्ययन गर्भावस्था मा सुरक्षा प्रमाणित छन्। जनावरहरूमा भएको अध्ययनको आधारमा, गर्भावस्थामा नोर्को वा भिकोडिनको प्रयोग मात्र हुन सक्दछ यदि ज्ञात लाभले जोखिमलाई बढाउँदछ।
के म रक्सीको साथ नर्को वा भिकोडिन प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीले हाइड्रोकोडोनको रगत एकाग्रता बढाउन र सीएनएस डिप्रेशनल प्रभावहरू बढाउन सक्छ। नोर्को वा भिकोडिन लिने बिरामीहरूले मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन।
के हाइड्रोकोडोनको आदी हुन सजिलो छ?
हाइड्रोकोडोन अत्यधिक लत हो। डीईए दुरुपयोग र दुरुपयोग को ढाँचा को कारण २०१ it मा एक अनुसूची दोस्रो मादक पदार्थ को लागी यसलाई पुनः वर्गीकृत। हाइड्रोकोडोन उत्पादनहरू मात्र मध्यमदेखि गम्भिर दुखाइमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ जसमा अन्य गैर-ओपिट विकल्पहरू असफल साबित भए।
चिसो हुँदा म के खाने?
के तपाइँ सामान्य रक्त शर्करा संग मधुमेह हुन सक्नुहुन्छ?
फारेनहाइट र सेल्सियस मा सामान्य शरीर को तापमान के हो
pepcid ac कति समय लाग्छ यो काम गर्न को लागी
प्रोटोनिक्स को सामान्य नाम के हो
एक बच्चा को लागी ibuprofen को अधिकतम खुराक के हो?
रगत परीक्षण मा hct स्वतः के हो